Heshiiska Abu Mansur muxuu ka bedeli karaa awoodda Al-Shabaab ku leedahay Soomaaliya? – Balcad.com Teyteyleey
Heshiiska Abu Mansur muxuu ka bedeli karaa awoodda Al-Shabaab ku leedahay Soomaaliya?
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Jimcihii aynu soo dhaafnay waxay shaacisay inay liiska kooxaha argagixisada ah ee Soomaaliya ka saartay Muqtaar Roobow Abuu Mansuur oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee xarakada Al-Shabaab oo madaxiisa ay horay u dul dhigtay lacag dhan $ 5-Milyan Dollar.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in hoggaamiyahaan uu ka tanaasulay fikirkii kooxda Al-Shabaab isla markaana wadahadallo hoose oo uu la galay Dowladda Federaalka Soomaaliya lagu guuleystay, iyadoo wararka ay sheegayaan in Muqtaar Roobow uu ku biirayo maamulka K/Galbeed ee uu dhalasho ahaan ka soo jeedo.
Taariikh ahaan Sheekh Muqtaar Roobow (Abuu Mansuur) waxa uu ka mid ahaa saraakiisha fara ku tiriska ah ee sida rasmiga ahaa uga tirsanaa ururka Al-Qaacida isla markaana tababar ciidan ku qaatay dalka Afghanistan, hase yeeshee markii uu dalka dib ugu soo laabtay ka tirsanaa madaxdii Maxkamadaha Islaamiga ahaa ee Muqdisho maamulayay 6-da bilood.
Markii ay burburtay Maxkamadihii Islaamiga ahaa Abuu Mansuur waxa uu ka mid ahaa saraakiishii asaasay ururka Al-Shabaab ee iyagu ku dhawaaqay inay xiriir la leeyihiin ururrada argagixisada caalamiga ah, taasi oo keentay in Dowladda Mareykanka sanadkii 2004-ta ku dartay liiska kooxaha argagixisada ah ee lagu raadinayay lacag dhan 5-Milyan Dollar.
Sidaas daraadeed Muqtaar Roobow Abuu Mansuur muddo ka badan 10-sano waxa uu ku dhuumaaleysanayay degaano ka tirsan gobolada Bay iyo Bakool, balse si rasmi ah uguma lug yeelan dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ku leedahay goboladaasi iyo dagaalka ay kula jiraan maamulka Koonfur Galbeed ee uu Madaxweynaha ka yahay shariif Xasan.
Tan iyo markii duqeyn diyaaradeed lagu khaarajiyay Axmed Godane hoggaamiyihii ururka Al-Shabaab oo Abuu Mansuur ka mid ahaa madaxda sida aadka ugu dhow ayaa sababtay inuu degaanka beeshiisa u haajiro, kaddib markii madaxda sarsare ee xarakada Shabaab uu soo kala dhex galay khilaaf sababay gacan ka hadal.
Arrintu si kastaba ha ahaatee wadaadkaan mayalka adag ee laga saaray liiska kooxaha argagixisada ah ee Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay isbedelka ku yimid fikradihii xagjirnimada ee uu aaminsanaa, balse waxaa su’aalo badan ku wareegsan heshiiska ay Dowladda la gashay ee aan weli la shaacin.
Sida lala wada socdo gobolada Bay iyo Bakool labadii sano ee ugu dambeysay waxaa ka dhacayay qaraxyo, dilal qorsheysan iyo weeraro ay Al-Shabaab ku qaadayaan madaxda, saraakiisha, ciidamada iyo xubnaha ka tirsan maamulka K/Galbeed kuwaasi oo galaaftay nolosha kumanaan ruux oo dad aan waxba galabsan.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM, ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku guuleysteen inay wiiqaan awoodii kooxda Al-Shabaab, hadana heshiiska Abuu Mansuur uu la galay Dowladda ayaa uga dhigan dhabar jab weyn oo kooxda soo wajahday taasi oo meesha ka saareysa inay meesha ka baxdo weerarada dhuumaaleysiga ah ee iminka ka wadaan gobolada Bay iyo Bakool.
Xayiraad ka qaadida Abuu Mansuur oo ku soo beegantay xilli Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) uu dhowaan mar kale cusbooneysiiyay xafis uu u fidiyay xubnaha Al-Shabaab haddii ay ka tanaasulaan afkaaraha kooxaha xagjirka ah, waxaana socda qorsheyaal cusub oo Dowladda ku kala direyso kooxaha argagixisada ah ee isugu jira Soomaalida iyo ajaanibta ka kala yimid dalalka shisheeyaha.
Si aad ah ayay ugu adag tahay inay aqbalaan kooxaha aaminsan fikirka xagjirnimada oraahda ah “Waxaad nabad ku weyso dagaal laguma helo” iyo dagaal aan dhammaad lahayn, waxayna dadka waaya aragga ah ee Soomaaliyeed u arkeen tallaabada Abuu Mansuur uu dib uga laabtay fikirka kooxda Al-Shabaab inuu sii dumayo waayihii kooxdaan looga baqayay inay qabsadaan dalka intiisa badan.
Ugu dambeyntii, Soomaali war-xuma tashiil lagama waayo iyo si xun wax u sheeg jaha wareerinaya dadka maankoodu gaaban yahay, hase yeeshee waxaan hubaa inaysan marna weecin karin yoolka ay hiigsanayaan iyo riyada shacabka Soomaaliyeed oo ku hoos nool qaranimada dalkooda oo dib u soo laabata, waana nasiib darro in kooxaha fidno-oogayaasha ah ay ku meereystaan arrimo qabiil iyo iska horkeenka shacabka.
Kanada: Kalkaaliso xabsi daa’in lugu xukumay ka dib waayeelo ay qaarijisay
Midowga Yurub oo beeniyay in shil uu galay mid ka mid ah maraakiibtooda ku sugan Xeebaha Somaliya